महान मानिस : कसरी बन्ने ? कसरी चिन्ने ?
चाहेर मात्र महान बन्न सकिँदैन । महान बन्ने सिद्धान्त र सूत्र आविष्कार पनि भएको छैन तर पनि मानिस महान बन्छ ।
मानिसहरू महान बन्न खोज्छन् तर महान बनाइन्न, आफैं बन्छ । चाहेर होइन, कार्यले महान बन्छ । न अरु कसैले कोहीलाई चाहेरै महान बनाउन सक्छ ।
महान कस्तो हुन्छ ? उसका विशेषता र कार्यहरू के कस्ता हुन्छन् ? चासोको विषय हो तर असल व्यक्तिले गरिसकेका काम र त्यसले छाडेका छापका आधारमा मात्र महान मानिस यस्तो हो वा यस्ता गुणहरू हुन्छन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
महानहरू विवेकशील हुन्छन् । अरुको दुःख, पीडा र अनुभूतिलाई आफ्नो बनाउने सामथ्र्यले कसैलाई महान बनाउँछ । अरुको दुःख–पीडा आफ्ना अनुभूतिमा लिने, अन्तरबोध गर्ने स्वभाव र सामथ्र्य महानमा हुन्छ । विवेकी मानिस सामान्य शब्दबाट पनि अरुमा आघात पुग्ला कि भन्ने सोच विचारमा हुन्छन् । अरुलाई आघात पुर्‍याउनु हिंसा सम्झिन्छन् । कम बोल्छन्, धेरै गर्छन् । जति गर्छन्, ठीक गर्छन् । त्यसैले महान सधै विवेकी हुन्छ । हरेक काम कुरा गर्नुअघि मनको हरि वा विवेकको अनुमति लिन्छ । हौसिँदैन, हतारिँदैन, मात्तिदैन, आत्तिदैन । आत्मनादको झंकारले रमाउँछ । उसका लागि सत्कर्म मनोरञ्जन हो । केही राम्रा काम गर्न पाउँदा उ सधै रमाउने गर्छ र आनन्दको स्वास फेर्छ ।
महान व्यक्ति विद्वान हुन्छ । ज्ञान आर्जनको भोकमा हुन्छ । उसलाई थाहा छ, ज्ञान किताबबाट, जीवनबाट र आफ्नै भोगाइबाट प्राप्त हुन्छ । अक्षर नजानोस् तर जीवन जान्दछ । आफूलाई जान्दछ र समाज–समस्त चराचरलाई जान्दछ । जीवन र जगत बुझेकाले नै उ महान बनेको हो । अक्षर त सबैले पढेकै हुन् । अक्षर चित्रहरू हुन् । चित्रलाई बुझ्नेले अनन्त भावमा बुझ्छ, नबुझेकाले आकार पढ्छ । आकारले मन र मष्तिस्कभन्दा आँखालाई (दृश्य) स्वाद दिन्छ । बुभ्mनेहरू चित्रमा भाव, प्रतिभाव, जीवन, अनुभूति, आविष्कार, संघर्ष, सौन्दर्य, शक्ति, परोपकार लगायत सबै देख्छन् । त्यसैले बुझ्नेहरू अक्षरमार्फत ब्रह्माण्डमा पस्छन् । अथाह ज्ञानमा डुबुल्की मार्छन् । सिर्जनाका शक्ति कमाउँछन् । अक्षरले विद्या दिन्छ, विद्याले विनय दिन्छ । विनय विवेकको आधार हो । महानहरूले अक्षर कम पढे होलान् तर विद्या धेरै लिएर विवेकी बने । लीक्वान यूले विद्यार्थीलाई थोरै पढाउ, धेरै बुझाउ भनेका थिए । राष्ट्र निर्माणका लागि धेरै पढेकाभन्दा बुझेका मानिसहरूको महत्त्व उनले बुझेका थिए । सीप, सिर्जना र इमानको महत्त्व बुझेका थिए । धेरै पढेर थोरै बुभ्mनु महानता होइन, थोरै पढेर धेरै गहिरिनु महानता हो । अक्षरका महाविद्यावारिधि ज्ञानलाई व्यंग्य गर्न सक्छ । विनयशील विवेकीहरू विना अक्षर, अझ भनौं व्यवहारका विद्यावारिधि हुन् ।
महानहरू दम्भी हुँदैनन् । अक्सर दम्भीहरू शक्ति, सम्पत्ति, रुप, उमेर, अनुचर आदिमा रमाउँछन् । दम्भले द्वेष जन्माउँछ । दम्भले विवेकलाई भष्म पार्छ र उन्माद, अहम् र अट्टाहासमा पुर्‍याउँछ । अभिमानले मानिसलाई उठ्न दिँदैन, स्वाभिमानले गिर्न दिँदैन । दम्भ समन गर्न नसक्नेहरू उठ्न सक्दैनन्, उठिहाले भनेपनि तासको घरझै गिर्न बेर लाग्दैन । त्यसैले कहिले महान बन्दैनन् । मोहन दाश दम्भी थिएनन्, शालीनता र अहिंसाका पुजारी थिए, त्यसैले महात्मा बने । सिद्धार्थ गौतम विनय र कर्मका हिमायती थिए, त्यसैले बुद्ध बने । स्टीभ्स जभ्स दम्भी थिएनन्, कर्म र पसिनाका पुजारी थिए । संघर्ष र बलिदानीमा ख्याउटे बनेका अब्राहम अनि मण्डेला दम्भी थिएनन् र पो राजनेता बने । युग–युगका राजनेता । दम्भीहरू बलय र अनुचरमा रमाउँछन् । महानहरू अनुयायी कमाउँछन् । अनुचर अस्थायी हुन्छन् – शक्ति, पद, पैसा, रुप आदिका । अनुयायी अनन्त रहन्छन् । अनुचरमा आग्रह हुन्छ, अनुयायी आत्मनादमा रमाउँछन् । संसारको विवेकशील पुनर्निर्माणमा रमाउँछन् ।
महानहरू पदमा रमाउँदैनन् । पदका भोका हुँदैनन् । महात्मा गान्धी पद विनै महात्मा बनेथे, न पदको राप न शक्तिको ताप । पदका मानिसहरू अक्सर आफूलाई उचो देख्छन् । उचो भएको भ्रममा बाँच्छन् । पदको अहम् र शक्तिको उन्मादले उचाइको भ्रम दिन्छ । महानहरू सधै धरातलमा उभिन्छन् र अरुको नजरमा उचो हुन्छन् । उचाइको माग आफैं गर्नेहरू उन्मादी कहलाइन्छन्, शक्तिअन्ध कहलाइन्छन् । धर्तीबाट ठडिएको सगरमाथा आफ्नो धरातल होचो धर्तीलाई सम्झन्छ । आफ्नो वास्तविकता आफैं बुझ्छ । धर्तीमा उभिएकाहरूले भने सगरमाथाको उचाइ र शालिनता आफैं बुझ्छन् तर सगरमाथा कहिल्यै भुल्दैन – म त्यहीँ उभिएको छु, पग्लिएर त्यहीँ पोखिन्छु ।
महान हुनु क्षमाशील हुनु पनि हो । कमी, कमजोरी हुनु मानवीय स्वभाव हो । कसैको गल्ती कमजोरीप्रति बदलाभाव राख्नु महानहरूको आचरण होइन । प्रतिशोध साध्नु उसको धर्म होइन । महानहरू क्षमा र त्यागका उदाहरण हुन् । बदलाभाव, इष्र्या र कुण्ठाको विष पिउनेले आफूलाई महान घोषित गर्न सक्छ तर त्यही इष्र्या, बदलाव र कुण्ठाका शिकारहरू उसलाई क्षमादान दिएर महानता प्रदर्शन गर्नसक्छ । गोरा शासकबाट दशौं वर्ष जेल यातना पाएका नेल्सन मण्डेला गोरा शासकलाई माफी दिई महान बने । मण्डेलालाई थाहा थियो, जेल जीवनको पीडा कति कष्टप्रद हुन्छ । सादगी किसुनजी चुनाव हार्दा हराउनेप्रति नै उदार थिए । महानहरू दुःखको प्रत्यारोपणबाट सुख खोज्दैनन्, क्षमा दिएर खुशी हुन्छन् । दुःखको अनुभूति हुनेले दुःखको प्रत्यारोपण गर्दैनन् । परपीडकहरू अरुको दुःखमा रमाउँछन्, क्षमताहीनहरू क्षणिक तुष्टिका लागि परपीडा दिन्छन् तर भित्रभित्रै छट्पटी र पिल्साइमा हुन्छन् । त्यसलाई दमन गर्न नसक्दा अपराधका शृंखलामा पुग्छन् । महानहरू अरुको सुखमा खुशी हुन्छन् । सिवी र दधिचि महान बने, व्याधाहरू शिकार गरेर परपीडामा रमाए ।
महानहरूको शक्ति निष्ठा, नैतिकता र इमान हो । उनीहरू कर्मको आचरणले मानवताको पूजा गर्छन् र समस्त जीवप्रति जिम्मेवार बन्छन् । महानहरू जे गर्छन्, स्वार्थहीन गर्छन् । स्वार्थहीनहरू सदाचारी हुन्छन् । परिश्रम र पसिनाले बाँच्छन् । दुराचारी र इमान नभएकाहरू पनि अरुसामु आदर्शको उपदेश दिन्छन् तर नैतिक शक्ति गुमाएकाले आदर्श बन्ने साहस उनीहरूमा हुँदैन । इमानीहरू शक्ति, सम्पत्ति, पद र अवसर गुमेपनि निष्ठा र नीतिसँग सम्झौता गर्दैनन् । नैतिक शक्ति असत्यसँग पराजित होला तर सत्य डग्दैन । थोरै महानहरूकै बलिदानी र सत्कर्मबाट मानव समाज आजको स्थानमा आइपुगेको हो । महानहरू असत्यसँग हार्दा पनि संयमित हुन्छन्, निरन्तर कर्म उनीहरूको निष्ठा हो तर प्राप्तिको अपेक्षा कसैबाट गदैनन् । उनीहरू लिनभन्दा दिन जन्मिएका हुन् । जित्ने असत्य पनि हार्ने सत्यसँग डराएको हुन्छ, आत्मिक रुपमा असुरक्षित अनि कुण्ठित हुन्छ । अनि षड्यन्त्रको सकुनीजाल रच्ने गर्छ तर निष्ठा र नैतिकताका आत्मिक शक्तिले इमानीहरू महानताको यात्रामा अविचलित हुन्छन् ।
महानहरू अरुको खुशी र प्रगतिमा आनन्द मान्छन् । पद, प्रतिष्ठा र अवसरको चोरी गर्दैनन् । अरुको सफलतामा आनन्दित हुन्छन् । क्षमताले नै जिम्मेवारी पाउने विश्वासमा रहन्छन् । पदलाई अवसर होइन, कर्तव्य र जिम्मेवारीका रुपमा लिन्छन् । जिम्मेवारीका खुट्किला चढ्दै जाँदा वैयक्तिक स्वार्थहरू छाड्दै जान्छन् । जस अरुलाई दिन्छन्, अपजसको भारी आफैं बोक्छन् । सहयोगी बन्नु उनीहरूको स्वभाव हो र चरित्रार्थ गर्छन्, भन्छन् मानिस सुख, सुख त्यो कहाँ छ, आफूलाई मिटाइ अरुलाई दिनु जहाँ छ ।
हो, मानिस सृष्टिको महान सिर्जना । मानिस महान बन्नै जन्मिएको हो । त्यसो गर्न मानिसलाई सृष्टिले विवेक दिएको छ । विवेक र बुद्धिकै कारण मानिस सृष्टिको सर्वश्रेष्ठ जाति हो तर श्रेष्ठता फगत जन्मले प्रस्टिँदैन । कर्मले नै मानिसलाई महान बनाउने हो । नीतिले बाटो देखाउने हो, विवेकले आत्मिक प्रेरणा लिने हो । बाटो बिराउनेलाई पनि विवेकीहरू सत्मार्गमा ल्याउने गर्छन् र महान बन्ने गर्छन् । महानहरू पद, प्रतिष्ठा र पैसालाई क्षणिक सम्झन्छन् । महानहरू जन्मँदा अरुजस्तै एक्लै हुन्छन्, कर्मले सबैका बन्छन् र अमर हुन्छन् ।
कोरोनाले शरीरभित्र ल्याउने आँधीबेहरी : यस्तो अवस्था...
वैकल्पिक सरकारबारे सर्वोच्चको यस्तो चासो
विद्यार्थीको रक्त समूह पहिचान गर्न नगरपालिकामा अभियान सञ्चालन
कोरोनाको अत्यासलाग्दो असर, हवाई क्षेत्रले कति गुमायो ?
धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफ बढ्यो
दक्षिण कोरियामा बस्ने नेपालीलाई कोरोनाको खोप निःशुल्क
पार्टीको असली हकदार दावी गर्न दुई गुटमा प्रतिस्पर्धा
तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योग कारबाहीमा
अर्थतन्त्र उकास्न कति चाहिन्छ पैसा ?
दर्शकसहित विश्वकप छनोट, १ करोड १० लाख कमाउने लक्ष्य